ကရင်နီမျိုးနွယ်စု: January 2009
Map of Karenni State
လုံး၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဓါတ်
Karenni Origin Women' old fashion
Kay Thoe Boe's Festival
Karenni's New Fashion
The Second Times of Karenni Resettlement Program
Around 2009 this year, thousands of Karenni minority ethnic groups will be started immigration and seeking their new life to settle in the United States and some will move different parts. In 2006-07, there were about 700 of Karenni people or more had already applied and reached to different countries for resettlement program already. Now if we total two camps of Karenni population together, there are not more than 25,000 people, regarding to the UNHCR annual reports. Moreover, it would be the second times of life changing for those Karenni people to move for resettlement program. Approximately, at least ten thousands of Karenni people will move different parts for the resettlement program....
Posted by ubeethuree at 6:55 AM0comments Links to this post
သံလွင်အရှေဘက်ခြမ်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ရနှ် SPDC နှင့် အပစ်ခတ်ရပ် KNPLF ကြိုးပမ်းနေ
ကရင်နီ (ကယား)ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရ နှင့် အပစ်ခတ်ရပ် ယူထားသော အဖွဲအစည်းတစ်ဖွဲဖြစ်သည့် ကရင်နီ ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြှောက်ရေးတပ် ( KNPLF ) ခေါ် ယင်းအဖွဲအစည်းသည် စစ်အစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကရင်နီပြည်အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှ ထွက်ရှိသော သစ်မာ(ကျွန်း၊ ပစ်ကတုန်း) စသည်ဖြင့်သစ်များကို ထုတ်ပြီး အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့် ထိုင်းကို တင်ပို့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကြားသိရပါသည်။ ၄င်းသစ်များ တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် (KNPP)ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ..သစ်များကို တင်ပို့ရောင်းချပါက မတရားသော နည်းလမ်းများဖြင့် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်သည်ဟု KNPP အကြီးအကဲများက သုံးသပ်ပြောဆိုသွား ပါသည်။ ၎င်းသစ်များတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရန် သံလွင်အရှေ့ဘက်ခြမ်းဒေသတစ်လျှောက်၌ truck ကားကြီးများ စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သကဲ့သို့ သစ်များကိုလည်း အလုံးလိုက် အပုံလိုက် စတင်ခုတ်လှဲနေပြီဟု ကရင်နီ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွား ပါသည်။
Posted by ubeethuree at 10:27 PM0comments Links to this post
Click here >> yoma3 >> MYANMARAHLIN >> KYAYMON >> MYANMAR.MMTIMES >> HITTAING >> KHITPYAING >> MIZZIMA >> IRRAWADDY >> VOA >> RFA >> DVB >> BBC >> BURMATODAY >> NARINJARA >> KT
Click here >> မနှင်းဆီနက် >> မြန်မာဘလောဂါများအတွက် >> မင်းထက်မိုးမိုးထက်မင်း >> Khine Mra Thein >> လှုပ်ရှားနေသောမိုးကောင်းကင် >> ကိုသီဟ ရန်ကုန် >> အိပ်မက် >> စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား >> ကိုသာလှဦး >> ကိုသီဟရဲ့ဒိုင်ယာရီ >> ကိုမင်းကျန်စစ် >> ဆောင်း >> မခင်ဦးမေ >> ကောင်မလေး၃ယောက် >> မနှင်းစက်မိုး >> မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် >> ဘားမားယူနိုက်တက် >> မြန်မာပြည်ဘလော့ >> မဇူလိုင်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ >> တောင်ပိုင်းဘလော့ >> ဆောင်းဟေမာန် >> မနှင်းသဇင် >> ကိုဝင်းဇော် >> မသက်ဇင် >> ကြယ်စင်လေး >> မမေပျို >> ကိုဇာဂနာ >> ကဒေါင်းညှင်သာ >> ဆရာမမေငြိမ်း >> ဆုံဆည်းရာ >> ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ >> ကိုမိုးသီးဇွန် >> ကိုသားဖြိုး >> ရေစင် >> မစိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင် >> ကိုစိုးဇေယျ >> ကိုနိုင်းနိုင်းစနေ >> ကိုအလွမ်းတွေဝေ >> ကိုဖိုးဇင် >> ကိုညီလင်းဆက် >> ကိုကျော်သူ >> ကိုချမ်းမြစိုး >> ကိုမောင်လှ >> မရတနာ >> အရှင်မေတ္တာစာရ >> ရာဘာ >> ယုန်ကလေး >> ကိုတီး >> ကိုမှော်ဆရာ >> ကိုမော်စီ >> ကိုအထူးကောင် >> ကိုဟန်သစ်ငြိမ် >> ကိုရန်အောင် >> ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ >> ကိုဖိုးသူတော် >> ကိုစိုးထက် >> ကိုသတင်းတိုက် >> ကိုကျည်ပွေ့ >> ကိုမီးပြတိုက် >> ကိုမင်းမင်း >> ကိုပြည့်စုံ >> ကိုတေဇာတေ >> ကိုကောင်းကင်ကို >> ကိုသင်ကာ >> ကိုလင်းဦး >> ကိုမင်းတစေ >> ကိုဘကောင်း >> ကိုချစ်ဦး >> ကိုဂျူလိုင်အိပ်မက် >> ကိုလူစိမ်း >> ကိုစပ်မိစပ်ရာ >> မဇင်ဇင်သူ >> ပိုကောင်းသောမနက်ဖြန် >> IT Beginner' Diary >> ဝေလေး >> Cloud >> ခွပ်ဒေါင်းသွေး >> အတ္တကင်းစင်- >> kingmarayu >> မြန်မာဘ၀ >> IERHEIN >> နှင်းပွင့်ဖြူလေး >> အလင်းရောင် >> nldlapenang >> ရွှေပြည်သူ >> သံလုံငယ် >> ဥယာဉ်မှူ >> ဇောင်း >> myanmarhero >> ကောက်တေး >> ထွန်းတောက်နေ >> ဖန်ခါးမြေ >> Ogre >> ကိုရဲမာန် >> ကိုသန့်ယဉ်ကို >> ကိုဖိုးစံ >> ရာမညဖိုးလပြည့် >> ဂျစ်ပစီလေး
သံလွင်အရှေဘက်ခြမ်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ရနှ် SPDC နှင့် ...